सरकारले प्रदेशमा पठायो बजेट , कुन प्रदेशमा कति ? - टुडे दैनिक डट कम
सरकारले प्रदेशमा पठायो बजेट , कुन प्रदेशमा कति ?
टुडे दैनिक संवाददाताJune 2, 2022 मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
जेठ १९ । सरकारले पालिका र प्रदेशमा पठाउने बजेटको टुङ्गो लगाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चार वटा अनुदानका शीर्षकमा प्रदेश र पालिका सरकारलाई पठाउने बजेट टुङ्गो लगाएको हो । पालिकाले तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशले एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ ले १९ अर्ब नौ करोड, मधेस प्रदेशले १९ अर्ब १५ करोड, बाग्मती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड, गण्डकीले १६ अर्ब ५४ करोड, लुम्बिनीले १८ अर्ब ४७ करोड, कर्णालीले १८ अर्ब ३० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
पालिकालाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत एक खर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड, समपूरक अनुदानबापत सात अर्ब २७ करोड र विशेष अनुदानका लागि नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस्तै काठमाण्डौ महानगरपालिकाले दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब ८० करोड २४ लाख पाएको छ ।
यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकाले एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।